हेर्नुहोस तपाईको असोज महिनाको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ? - Financial Notices
मंसिर १७,२०७७ / ०६ : १३
हेर्नुहोस तपाईको असोज महिनाको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ?
Financial Notices 2077-6-1
असोज महिनाको आर्थिक राशिफल (२०७७)
सुरुवाती समय अनुकुल रहन सक्नेछ । साथीभाईको सहयोग मिल्नुका साथै नयाँ काम सुरु गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ हुनेछ । महिनाको मध्यतिर मानसिक तनाब बढ्नाले काम सम्पन्न गर्न समस्या हुन सक्ने र विरोधीहरुले काम बिगार्न सक्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्नेछ। महिनाको अन्त्यतिर रोकिएका कामहरु बन्ने र रचनात्मक काममा रुचि बढ्ने रहेको छ।
महिनाको सुरुवाती समय काममा जिम्मेवारी बढ्न सक्ने, कार्य सम्पादन राम्रो सँग गर्न सकिने छ। महिनाको मध्यमा व्यक्तिगत वा पारिवारिक क्षेत्रका समस्याले गर्दा काममा पनि असर गर्न सक्छ। महिना अन्त्यमा काममा सुधार र आर्थिक उन्नतिको अवसर आउन सक्छ।
महिनाको सुरुवाती समयमा काममा केहि अबरोध आउने, अनावश्यक विवाद हुने र खर्च धेरै हुन सक्ने रहेकाले ध्यान दिनुपर्ने छ। महिनाको मध्यतिर पनि कामबाट जस नमिल्ने, विरोधी आफूभन्दा बलियो हुन सक्ने रहेको छ। महिनको अन्त्यतिर काम र आर्थिकमा सुधार देखिन सक्छ।
कामबाट आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन सकिनेछ। विरोधीहरु परास्त हुनेछन्। नयाँ लगानीको अवसर आउन सक्छ। पूर्व सन्चित धनहरुमा वृद्धि हुन सक्छ। योजनाअनुरूप काम सम्पन्न हुुनेछन् । आर्थिक लाभ हुुनसक्छ । खर्च पनि बढ्न सक्ने छ।
समय सामान्य रहेको छ। आर्थिक लेनदेन गर्दा विचार पुर्याउनु पर्छ। विश्वास गरेकाबाट विश्वासघात हुन सक्छ। काममा सामान्य प्रगति हुनेछ। आर्थिक कारोबारमा ध्यान दिएर काम गर्दा आर्थिक क्षेत्र राम्रो रहन सक्नेछ।
कन्या राशिका लागि यो महिना राम्रो रहेको छ। आफन्त वा साथीभाईको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न हुनेछ। पदीय उन्नति हुनेछ। मनोरन्जनको क्षेत्रमा खर्च हुन सक्छ। नयाँ सामान खरिद गरिनेछ। महिनाको अन्त्यतिर काममा सामान्य समस्या आउन सक्छ।
यो महिना तुाल राशि हुनेहरुका लागि आर्थिक विषयलाई लिएर मन दोधार रहन सक्छ। किनबेच सम्बन्धि कामहरु राम्रो हुन सक्छ। अरुलाई पैसा दिदा विचार गर्नुपर्छ। आम्दानीमा सामान्य वृद्धि हुन सक्छ। अनावश्यक खर्च बढ्न सक्नेछ।
शेयर बजार वा अन्य दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ। पहिले लगानी गरेका क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ। नोकरीबाट पनि आर्थिक उन्नति वा राम्रो धन प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको रहेको छ।
नयाँ काम वा व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने समय छ। प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ। गरिरहेको काममा पदोन्नति हुने वा नयाँ जिम्मेवारी मिल्न सक्नेछ। आम्दानी पनि राम्रो हुन सक्नेछ।
महिनाको सुरु र मध्यको समयमा कामबाट अपजस आउन सक्ने, काममा सामान्य रोकावटले पनि आर्थिक समस्या आउन सक्नेछ। महिनाको मध्यतिरबाट काममा रहेको अबरोध हट्ने, रोकिएको आर्थिक लेनदेन मिल्ने र आर्थिक क्षेत्रबाट केहि सन्तुष्टि मिल्न सक्ने समय रहेको छ।
हतारमा काम गर्नाले आर्थिक हानी हुनसक्छ। अनावश्यक विवाद हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धी बलियो हुने र विश्वासघात हुन सक्ने रहेको छ। राम्रोसँग सोचविचार र मेहनतका साथ अगाडि बढ्दा समय फलदायी हुनेछ। महिनाको अन्त्यतिर काम र आर्थिकमा सामान्य सुधार हुन सक्छ।
पारिवारिक समस्याले काममा अलिक ध्यान नसकिने समय रहेको छ। काममा मेहनत गर्दा राम्रो प्रगतिको अवसर मिल्न सक्छ। धन संचय पनि हुन सक्नेछ। रचनात्मक काममा रुचि हुनेछ। महिनाको अत्यतिर मनोरञ्जन वा पारिवारिक क्षेत्रमा खर्च हुन सक्छ।